5 Fairytale Obodo Iji Gị Na Normandy | Save A Train
Home > Travel Europe > 5 Fairytale Obodo Iji Gị Na Normandy
N'ógbè Normandy emi odude ke n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ nke France na bụ a dịtụ obere njem n'ebe Paris. Ọ bụ a na-ewu ewu njem aga n'ihi na ọtụtụ ndị na-na chọrọ na-enweta ọdịdị zuru oke nke Northern France. Normandy nwere ya niile, si a ọgaranya akụkọ ihe mere na ụbọchị ndabere ọtụtụ narị afọ, ka ịtụnanya Okirikiri ala na-atọ nri nke ga-ahapụ gị na-achọ ihe. Otú ọ dị, otu n'ime ndị isi na-adọrọ mmasị nke Normandy bụ ịrịba ije. The region bụ n'ụlọ ka pụtara fairytale obodo na n'ezie weghara pụrụ ichetụ n'echiche. The eke mara mma na-ejikọta na ndị a ọrụ n'aka obodo doo ọtụtụ egwu. N'ihi na ịrịba ewu ewu na nke a picture-zuru okè ebe, Save A Train ka-etinye ọnụ a ndepụta 5 Fairytale obodo ileta na Normandy. Gbalịa ịdị na-ha na njem gị oge ọzọ ị na-ejegharị ejegharị site France.
1. Fairytale Obodo Iji Gị Na Normandy: Honfleur, Calvados
Honfleur pụrụ ịbụ ndị kasị ama obodo na nke a ndepụta. Ọtụtụ ndị njem nleta na-eleta obodo ọdụ ụgbọ mmiri a mara mma ma nwee obi ụtọ na ihe niile ọ nwere. Ọ bụ ihe pụrụ iche na recognizable n'ihi na ya ogologo, warara, na yi ụlọ. Ọ na-eje ozi dị ka onye mmụọ nsọ ọtụtụ artists ofụri afọ, na pụrụ iche na yi ụlọ e weghaara na ọtụtụ ihe osise. A ije site na n'okporo ámá nke Honfleur ga-ahapụ gị mmetụta dị ka gị dochie a masterpiece. It will undoubtedly enchant you.
The obodo nwere otutu njem nleta na-abịa site na ya na-enye ihe niile si na-atọ ụtọ Erimeri, na-akpali akpali ngosi ihe mgbe ochie. Ọ bụrụ na ị gaa nke a kediegwu obodo, lee ya mma na akụkọ ihe mere eme. Ọtụtụ ihe, jide n'aka na-enwe mmiri nke obodo, nke a maara dị ka ndị Vieux Bassin. Ọ bụ n'etiti ndị kasị ama njem nleta ebe na Normandy. Ọdụ ụgbọ mmiri bụ otu ugboro n'ụlọ ukwuu n'ime akụ azụ ụgbọ mmiri na trading arịa. Otú ọ dị, ihe karịrị afọ ọ ghọrọ home ọtụtụ yachts.
Rouen ka Brest Ụgbọ oloko
Rouen ka Le Havre Ụgbọ oloko
2. Les Andelys, gị
Les Andelys bụ ihe niile ị chọrọ na a quintessential French obodo. Maa mma obodo bụ nri na-esote ndị Seine River. Na mgbakwunye na idi nso a mara mma osimiri, Les Andelys nwekwara ugwu ugwu mara mma na okwute na-acha ọcha okwute gbara ya gburugburu. Les Andelys bụ picture-zuru okè, nke bụ ihe mere ọtụtụ ndị ọbịa snap narị photos nke a kediegwu obodo na ya na gburugburu ala.
Ke adianade na ya mara mma, Les Andelys bụkwa ama n'ihi na ya 12th na narị afọ obí eze. nnukwu ụlọ, Chateau Gaillard, bụ otu ugboro n'ụlọ Richard na Lionheart. Mgbe nnukwu ụlọ nwere ike ịbụ na mkpọmkpọ ebe ugbu a, ya nnukwu size na Mee ka Mesie ọbịa na ịrị elu nkume bluff ịhụ ya.
Paris na Le Mance Ụgbọ oloko
Paris ka Brest Ụgbọ oloko
Le Havre na Le Mans Ụgbọ oloko
3. Fairytale Obodo Iji Gị Na Normandy: Giverny, gị
Giverny na-kasị mara maka Claude Monet obibi. Claud Monet ịgbaziri agbaziri ihe onwunwe na 1880s na ezinụlọ ya. N'ime afọ ya uba tụgharịa ka mma, o wee bara ọgaranya karị. ekemende, ọ bụ ike na-azụ ihe onwunwe, nakwa dị ka ụfọdụ ndị gbara ya gburugburu ala. Monet wuru a studio e na kere a otutu ya ọrụ na na ihe onwunwe, nke na-etinye Giverny na map. E wezụga Giverny ụlọ na-enwe mmasị nke Monet, ọ bụkwa n'ụlọ ndị ọzọ impressionist nka. Ndị a gụnyere Claude Cambur, Christophe Demarez, na Ramier. The ọgaranya akụkọ ihe mere na-adọrọ na a otutu art ndị hụrụ na chọrọ na-enweta ndụ na-arụ ọrụ nke ndị a ịrịba nka.
Na mgbakwunye na akụkọ ihe mere eme dị egwu nke obodo ahụ, obodo bụkwa ama n'ihi na ya ọmarịcha mma. Ọ bụ otu n'ime isi ihe mere nka n'anya ya. Na otu amara adọta ọtụtụ ọbịa taa. Maa mma obodo cottages, ọmarịcha ubi, na ewu ewu eke ambiance bụ a kwesịrị-Lee. Make sure to stop by Giverny if you are ever in the Eure region of Normandy.
Paris na Le Havre Ụgbọ oloko
Le Mans na Paris Ụgbọ oloko
A na-eju obere obodo dị na Pays dAuge region. The region bụ ma ama n'ihi na ya mmanya ogbugbu na cheese. Na mgbakwunye na mma ndị na-amasị na mpaghara na-enye, ị nwekwara ike na-enweta mara akụkọ ihe mere eme na obodo nta. Otu n'ime ndị kasị ama obodo na ebe bụ Beuvron en Auge. Ọ bụ ihe jupụtara akụkọ ihe mere eme ebe-obibi na ụbọchị azụ 1500s. Ụlọ dị ka Vieux manor si narị afọ nke 16, jikọtara na ọkara osisi wuo ụlọ si narị afọ nke 17, ga-eme ka ị na-eche dị ka ị gara azụ na oge. Na-eje ije ala cobbled n'okporo ámá nke Beuvron en Auge bụ n'ụzọ zuru okè na-eji otu ehihie.
Brest na Le Mans Ụgbọ oloko
Nantes ka Brest Ụgbọ oloko
Le Mans ka Rennes Ụgbọ oloko
Le Mans ka Rouen Ụgbọ oloko
5. Fairytale Obodo Iji Gị Na Normandy: Barfleur, ụfọdụ
On ugwu ọwụwa anyanwụ nke Normandy Cotentin Peninsula ụgha mara mma ala gbara osimiri okirikiri obodo nke Barfleur. Nke a jụụ azu obodo nke naanị banyere 700 bi na-kasị mara maka ya pụtara ịma mma. Ọ e eze kwusara dị ka otu n'ime ihe ndị kasị mma obodo na France. Ọ ama okpono na aha nke Plus Beaux Village de France, and it is clear to see why.
Barfleur bụ a mkpuru ka mba ndị ọzọ. Na mgbakwunye na ọmarịcha ebe obibi na oké osimiri na-ele, ọ bụkwa n'ụlọ akụkọ ihe mere eme ije. Firstly, n'okporo ámá onwe ha na-cobbled na ezi ochie. Nke abuo, ọtụtụ ochie ụlọ ụbọchị azụ narị afọ nke 16. Ihe odide kasị ochie ụlọ n'obodo-aga azụ ihe n'ihu karịa nke ahụ. Na Sainte Catherine n'ogige, ị pụrụ ịhụ a ụlọ na ụbọchị laghachi emepechabeghị. Ọ nwere ihe n'ọnụ ụzọ, mpụga steepụ, na mullioned windows. Ọ bụ ezie na Barfleur bụ a obere obodo, ọ bụ uru a nleta if you are in the area.
Brest na Rennes Ụgbọ oloko
Brest na Nantes Ụgbọ oloko
Lille ka Le Havre Ụgbọ oloko
Tours na Le Havre Ụgbọ oloko
Normandy bụ nnọọ nnukwu, na n'agbanyeghị na ọ na-home ọtụtụ fairytale obodo, ọ bụla n'ime ha bụ ihe pụrụ iche. Onye ọ bụla nwere ya kachasi mkpa na agwa na epupụta ọbịa egwu. Ọ bụrụ na ị chọrọ na-enweta ihe ndị dị ịtụnanya nke obodo ndị, nakwa dị ka ihe niile ọzọ Normandy nwere na-enye, Book A Train Ticket na-amalite gị njem.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Fairytale Obodo Iji Gị Na Normandy” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffairytale-towns-visit-normandy%2F%3Flang%3Dig – (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
Obodo Fairytaletowns frenchtowns Normandy Train Travel ụgbọ okporo ígwè njem Atụmatụ travelfrance traveltips